भाग्य को टिकट (विषय पार्क)
भाग्य स्लट को विषय पार्क टिकट – मोबाइल र अनलाइन बोनस!
भाग्य को टिकट (विषय पार्क) अनलाइन स्लट, जुन मा जारी 2016, तपाईँको स्क्रिनमा सम्पूर्ण विषय पार्क दिन्छ एक रंगीन स्लट छ. तपाईं विषय पार्क को सबै सवारी लिएर को अवसर प्राप्त र वास्तविक पैसा विजेता गरेर thrill पाउनेछन्. यो एक महाकाव्य मुठभेड किनभने हुनेछ यो अनलाइन र मोबाइल स्लट मेसिन तपाईं थोक बोनस सुविधाहरू दिन हुनेछ खेल्न. हरेक सवारी र हरेक खेल केही अपिल विजेता पुरस्कार इनाम दिनुहुनेछ किनभने तपाईंले छनौट गर्नुपर्छ सवारी जो कि निर्णय गर्न सक्षम हुने छैन.
तपाईंले देख्नुभएको छ हाम्रो Youtube स्लट र क्यासिनो भिडियो यद्यपि – तिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ!
नेट मनोरञ्जन धेरै अनलाइन परिचय एक प्रसिद्ध अनलाइन भिडियो गेम विकास कम्पनी हो मोबाइल स्लट हरेक बर्ष. यो कम्पनी फरक विषयवस्तुहरू आधारित अनलाइन मोबाइल स्लट उत्पादन, कल्पना जस्तै, खेल, र केही स्लट प्रसिद्ध व्यक्तित्व आधारित हुन सक्छ. यो पहिलो पटक NetEnt शुरू छ भाग्य को टिकट (विषय पार्क) अनलाइन स्लट, जो एक रंगीन विषय पार्क मा आधारित छ.
भाग्य स्लट को टिकट (विषय पार्क) अनलाइन स्लट संग 5-रील अनलाइन स्लट छ 50 तलब लाइनहरु. खेलाडी मात्र 25p लागि रील स्पिन गर्न सक्षम हुनेछ र तिनीहरूले गर्न सक्षम हुनेछ £ 250 गर्न शर्त आकार अप वृद्धि. यो Jackpot पुरस्कार यहाँ £ 2,000 छ र अधिकतम जीत धेरै भएको Jackpot पुरस्कार भन्दा ठूलो हुन सक्छ. यो अनलाइन स्लट विषय र Rollercoaster सान्दर्भिक सुनौलो टिकट स्क्याटर साथ जंगली प्रतीक हुनेछ अधिकतम प्रतीक छ.
भाग्य को टिकट (विषय पार्क) अनलाइन स्लट तपाईं बोनस सुविधाहरू एक ठूलो संख्या दिन हुनेछ. आधार खेल समयमा तीन वा बढी wilds अवतरण किनभने wilds स्ट्याक्ड wilds रूपमा देखा पर्न सक्छन् लागि भाग्यशाली हुनेछ र विजेता रकम यो निम्न विशाल हुनेछ. केही खिलौने तपाईँलेजित्नुभयो राशि प्रतिनिधित्व हुनेछ र रकम तपाईंको खातामा थप गरिनेछ.
टिकटको पाङ्ग्रा सुविधा यो अनलाइन स्लट को प्रभावशाली सुविधा छ. तपाईं अवतरण गरेर टिकट पाङ्ग्रा स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ3वा बढी छरिन्छ. यी टिकट तपाईं विषय पार्क गर्न प्रविष्टि प्रदान गर्नेछ किनभने अधिकतम टिकट जीत प्रयास. तपाईं हाँस Shoot खेल जस्तै खेल खेल्न सक्षम हुनेछ, स्की बल खेल, स्लेज हथौडा खेल र टिकट प्रयोग गरेर धेरै अन्य खेल.
NetEnt गेमिङ विकास अनलाइन मोबाइल स्लट को एक नयाँ शैली शुरू भएको छ भाग्य को टिकट (विषय पार्क) अनलाइन स्लट. रंगीन ग्राफिक्स संग संयुक्त धेरै बोनस सुविधाहरू यसलाई सक्रिय सबै भन्दा राम्रो अनलाइन स्लट को 2016.